Global Voices teny Malagasy » Korea Atsimo: Nabaribarin’i Hyo-ri mpanjakan’ny K-pop ny olana momba ny fakan-tàhaka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Jolay 2010 5:17 GMT 1	 · Mpanoratra Lee Yoo Eun Nandika Candy
Sokajy: Azia Atsinanana, Korea Atsimo, Toekarena sy Fandraharahàna, Zavakanto & Kolontsaina
Lee Hyo-ri  dia fanta-daza amin'ny pop Koreana Tatsimo sy matihanina efa nahavita fampisehoana tanatin'ny 13 taona, izay mandray karama efa ho 10 arivo tapitrisa Won Koreana ( 8.1 tapitrisa dollars) isan-taona, araka ny tatitr'ireo fampahalalàm-baovao ao an-toerana . Manana mpankafy maro maneran-tany izy noho ny fisehoany matetika amina fampisehoana sy ireo hira sy dokambarotra maro mifangaro. Vao nivoaka ny rakikiran'i Hyori fahaefatra dia nalaza avy hatrany, nefa koa avy hatrany dia niteraka ahiahy fa toa mitovy loatra ireo hirany sasany ka mety tsy tena azy. Nandà izany ny orinasa mpiantoka an'i Hyori raha tsy izy mihitsy no nanazava tamin'ny volana Jona fa ireo hira enina izay azony tany amin'ilay tarika mpamoron-kira Bahnus Vacuum dia nalaina tahaka tamina hira vahiny. Tao amina fanambaràna ofisialy dia namoaka lahatsoratra i Hyori tao amin'ny sehatra fifandraisany amin'ireo mpankafy, naiky izy fa tena dika tsy ara-dalàna tokoa ireo hira niteraka disadisa ary miala tsiny amin'ireo izay nahatsapa ho tohina tamin'izany fihetsiny izany izy sady hiato kely amin'ny sehatry ny mozika aloha izy. Bahnus izay nanome azy ireo hira kosa dia tsy mbola nanao fanambaràna ampahibemaso taorian'ireo fiakena ireo.
Na dia olana resahina matetika aza ny fakan-tàhaka any Korea, tsy fahita firy izany mpihira miaiky tanteraka izany. Ny ankamaroan'ireo mpitoraka blaogy dia nidera ny fiaiken'i Hyori ho fihetsika feno herim-po. Nilaza ny Nilaza ilay mpitoraka blaogy Eunkoung8072  fa toe-tsaina mahamenatra ny fakan-tàhaka ary fahafaham-baràka ny fihetsik'ireo mpihira hafa amin'izany, fa i Hyori kosa dia ohatra tsara ho azy ireo.
Ireo tsikera dia manameloka an'i Hyori sy ny orinasa mpiantoka azy, Mnet, iray amin'ireo fahitalavitra lehibe indrindra misahana ny mozika any amin'ny firenena, noho ny tsy firaharahiana ny ahiahy naterak'ity fitoviana tsy azo iadian-kevitra ity. Nanambara ilay mpitoraka blaogy Ourvillage  fa tara loatra ny fandraisana fepetra sy ny fialàna tsiny taorian'ny nanararaotan'izy ireo tamin'ny tombombarotra azo tamin'ilay rakikira nandritra ny roa volana be izao.
Miha-betsaka hatrany ny fiahiahiana ny fakàn-tahaka ankehitriny. Maro ny olona no mahita fa manome fomba maro ahafahan'ny olona mihaino ny hiran'ireo mpihira vahiny ny aterineto, ka miha-sarotra ho an'ireo mpamoron-kira ny hanao ny mpihaino ho toy ny adala. Niteny ny mpitoraka blaogy iray ao amin'ny Liveblog  fa ireo mpampiasa aterineto dia afaka mahafantatra avy hatrany ny hira nalaina tahaka ary ho voasakana ny tetika fakàn-tàhaka.
Namelabelatra ny mpitoraka blaogy Conte0303  fa tsy eo amin'ny sehatry ny indostrian'ny mozika ihany no ahitàna ny fakàn-tàhaka, fa sehatra maro eo amin'ny tontolon'ny orinasa Koreana no tratran'izany ary vao mainka manasarotra ny toe-javatra ny fanamorana sy ny tsy firaharahian'ny olona izany olana izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/07/04/6870/
 sarin'i Lee Hyo-ri nalaina mpankafy iray.: http://hyologic.egloos.com
 Lee Hyo-ri: http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Hyori
 araka ny tatitr'ireo fampahalalàm-baovao ao an-toerana: http://www.newsen.com/news_view.php?uid=200809160855101001
 Nilaza ilay mpitoraka blaogy Eunkoung8072: http://blog.naver.com/eunkoung8072?Redirect=Log&logNo=60109524119
 Raha tianao hamarinina ireo hira dia tsindrio eto. Ireo hiran'i Hyori niteraka disadisa dia arahin'ireo hira tena izy mitovy aminy. : http://blog.naver.com/pdquattro?Redirect=Log&logNo=20106978267
 Nanambara ilay mpitoraka blaogy Ourvillage: http://ourvillage.tistory.com/789
 Niteny ny mpitoraka blaogy iray ao amin'ny Liveblog: http://blog.naver.com/liveblog?Redirect=Log&logNo=70088439216
 Namelabelatra ny mpitoraka blaogy Conte0303: http://conte0303.tistory.com/540